Qalalaadka Clement Lenglet oo Sii badanaya xilli barcelona ay ka fikireyso Miisaaniyada Suuqa. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Qalalaadka Clement Lenglet oo Sii badanaya xilli barcelona ay ka fikireyso Miisaaniyada...
Qalalaadka Clement Lenglet oo Sii badanaya xilli barcelona ay ka fikireyso Miisaaniyada Suuqa.
Barcelona ayaa dhibaato iyo culeys weyn u aragta daafaca faransiiska clement Lenglet kaas oo qalalaadkiisa badanayeen kulmadii lasoo dhaafay ee uu kasoo muuqday barcelona isagoo dhibaato ku haya qeybta daafaca oo aad uga liita sanadihii lasoo dhaafay.
Marca ayaa soo werisay in daafaca dhexe ee Clement Lenglet uu noqday mid aan laga fiirsan karin oo ku dhinta Barcelona ka dib markii uu saxiixay qandaraas ku kacaya 5.7 milyan euro sanad walba isagoo kooxda ku sugnaa doonab ilaa sanadka 2026.
Waxay noqon laheyd hal shay haddii uu si fiican u shaqeynayay, laakiin waqtigan xaadirka ah wuxuu noqon karaa isku xirka ugu liita difaaca kooxdiisa. Sababtoo ah Barcelona waxay ku jirtaa xaalad dhaqaale oo adag inay horay u socoto, Lenglet wuxuu noqon karaa caqabad lacageed sanadaha soo socda iyadoo kooxdu ay isku dayeyso inay horumariso kooxdeeda miisaaniyad dhameystiran.
Previous articleManchester City oo guul ka gaartay Arsenal, Raheem Sterling oo ka caawiyay
Next articleLiverpool oo xiiseyneysa qadka dhexe Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus.